ငါး Hunter ဂိမ်းသမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3အဆိုပါနက်ရှိုင်း၏ Plus အားမာစတာ – အမြင့်အမြတ်ဦးပိုင်ငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဗ် Customize. Excellent ကကက်ဘိနက်.
အမြင့်အမြတ်ငါး Hunter ဂိမ်း
ငါး Hunter ဂိမ်း သမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3: Pဌအဆိုပါကိုမာစတာ : Deep
ငါး Hunter ဂိမ်းသမုဒ္ဒရာဘုရင်က Play လုပ်နည်း3အဆိုပါနက်ရှိုင်း၏ Plus အားမာစတာ
ငါး Hunter ဂိမ်းထဲမှာ သမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3အဆိုပါနက်ရှိုင်း၏ Plus အားမာစတာ, ဖမ်းရန်ကွဲပြားခြားနားသောငါးရှိပါတယ်, တန်ဖိုးရှိကွဲပြားခြားနားသောအချက်တန်ဖိုးများများမှာအားလုံးသော. ကစားသမားဂိမ်းကာလအတွင်းသူတို့ကဖမ်းငါး၏နံပါတ်နှင့်တန်ဖိုးကိုအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အမှတ်ရမှတ်တိုးမြှင့်.
အဓိကသမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ Plus အား: အဆိုပါနက်ရှိုင်းသောဂိမ်း၏မာစတာ features နဲ့ mini ကိုဂိမ်းတွေနဲ့ layered ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကစားသမားတွေပိုပြီးအချက်များဝင်ငွေမှတစ်ဦးမြင့်မားအခွင့်အလမ်းပေးနှင့်အလှည့်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ဤသူတို့သသုံးစွဲဖို့အရေးကြီးလှသည်, ပိုပြီးအနိုင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအလားအလာ.
ငါး Hunter ဂိမ်းသမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျအတွက် features တွေ3Plus အားအဆိုပါနက်ရှိုင်း၏အရှင်ဘုရားတို့ပါဝင်သည်:
ကြံ့ – အကြီးအကဲ
မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း - သူဌေးက
ခခြှေဲ Hammer ဂဏန်း
သစ်ငါး Hunter ဂိမ်းသမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3အဆိုပါနက်ရှိုင်း၏ Plus အားမာစတာ
ဒါကအစာရှောင်ခြင်း PACE ဖြစ်ပါသည်, ထကြွဘွယ်ဖြစ်သော, 2ပိုပြီးပြန်လာမယ့်ကစားသမားကိုစောင့်ရှောက်မည်အကြောင်း ~ 10 ကစားသမားငါးအမဲလိုက်ဂိမ်း. non-ရပ်နားအရေးယူအထူးလက်နက်များတပ်ဆင်ထား, ရေကူးနဂါး, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပင်လယ်သတ္တဝါများ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုး. ကစားသမားသူတို့တစ်ဦးချင်းစီရိုက်ချက်တွေနဲ့သုံးဖြုန်းချင်မည်မျှအချက်များညှိနိုင်ပါတယ်. ၎င်းတို့၏လက်နက်များရည်ရွယ်ထားရန် Joystick အသုံးပြုခြင်း, ကစားသမားများပင်လယ်သတ္တဝါများကိုဖမ်းယူဖို့ကြိုးစား. ဖမ်းဆီးရမိပင်လယ်သတ္တဝါများရိုက်ချက်တန်ဖိုးကိုအပေါ်အခြေခံပြီးကစားသမားမှတ်ပေး. ပိုကြီးတဲ့သတ္တဝါတွေထက်ပိုရိုက်ချက်များယူ. အကွိမျမြားစှာကစားသမားအတူတူပင်သတ္တဝါများမှာရိုက်ကူးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးတည်းသာကစားသမားအချက်များအရလိမ့်မယ်. အားလုံးတဦးတည်းအတွက်တစ်ဦးကသမဝါယမနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကစားပွဲ.
ငါး Hunter ဂိမ်း စာရင်း
ပို့ဆောင်ချိန် :3DHL မှတဆင့်ရက်ပေါင်း
1.ထိပ်တန်းဂိမ်းဆော့ဖျဝဲ R ကို&တရုတ် D နှင့် manufacturingin
2. စိတ်ကြိုက်မြင့်မားသောကျင်းပနိုင်ရန် profitgame ဆော့ဖျဝဲ
4. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်မူထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း play, လှပသောရုပ်ပုံ, တောက်ပသောအသွင်အပြင်, ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားလုပျထုံးလုပျနညျး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဟာ့ဒ်ဝဲ, တည်ငြိမ်ဝင်ငွေ, အသစ်အချိန်မီ update ကို
တစ်ဦးက: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနောက်ကွယ်မှရပ်နှင့်အမှုကြောင့်ထုတ်လုပ်သူရဲ့အပြစ်အနာအဆာမှချွတ်ယွင်းကြောင်းမည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်အစားထိုးမညျ. အာမခံမေးခွန်းများကိုနှင့်အတူနည်းပညာပံ့ပိုးမှုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ, ကျနော်တို့ဝယ်ယူများ၏ရက်စွဲကိုအတည်ပြုနိုင်အောင်ထုတ်ကုန် serial number ပေးပါ.
အဆိုပါဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့: 12 ဝယ်ယူ၏နေ့စွဲကနေတစ်လအာမခံ.
တစ်ဦးက: သေချာတာပေါ့, ကိုစိတ်ကူးကိုပြောပြခြင်းနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကြောင်းပြုလိမ့်မည်ကျေးဇူးပြုပြီး. တဖန်သင်တို့ software ကိုဝန်ဆောင်မှုပေး.
တစ်ဦးက: ယေဘုယျအားဖြင့် 1 ~3ရက်(ဂိမ်းပစ္စည်းများ)/5~7ရက်(ဂိမ်းဝန်ကြီးအဖွဲ့) ကုန်ပစ္စည်းစတော့ရှယ်ယာ၌ရှိကြ၏လျှင်. ကုန်ပစ္စည်းစတော့ရှယ်ယာထဲမှာမဖြစ်ကြပါလျှင်သို့မဟုတ်ပါက5~7ရက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အရေအတွက်နှင့်ညီသည်.
တစ်ဦးက: ဝါယာကြိုးပေးချေမှု, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, အလီဘာဘာအတွက် UnionPay နှင့် Pay ကို( လက်ခံခဲ့သည်အကြွေးကတ်များ )
ငွေပေးချေမှုရမည့်<= 5000USD, 100% ကြိုတင်ပြီး. ငွေပေးချေမှုရမည့်>= 5000USD, 50% ကြိုတင်မဲအတွက် T / T ,တင်ပို့မတိုင်မီချိန်ခွင်လျှာ.
ငါး Hunter ဂိမ်း, ငါးသေနတ်သမားဂိမ်းများ, ငါးသေနတ်ပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ